Homeसमाचारत्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुमाथि लुट: १ बोतल पानीको सय रुपैयाँ, चिया कपको दुईसय !
October 9, 2018 Spnews समाचार Comments Off on त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुमाथि लुट: १ बोतल पानीको सय रुपैयाँ, चिया कपको दुईसय !
चिया कपको दुईसय !
चितवनका अधिकांश कष्मेटिक पसलमा सबै सामान नक्कली फेला
November 16, 2017 Spnews समाचार Comments Off on त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुका लगेज फोरेर सामान चोरी गर्ने लोडर पक्राउ
काठमाडौं, कात्तिक ३० । त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुका लगेज फोरेर सामान चोरी गर्ने नेपाल एयरलाइन्सका लोडर ‘लोडर’ पक्राउ परेका छन् । नेपाल एयरलाइन्स अन्तर्गत सुनगाभा सप्लायर्सका कर्मचारी विमल केसी, विक्रम लामा र विर्खराज विक पक्राउ परेका […]